Talohan’ny nanakanana azy, nandrisika ny tanora hanatevin-daharana ny vondrona mpanafika mahery setra tany Mozambika avaratra ity pejy Facebook ity · Global Voices teny Malagasy
Talohan'ny nanakanana azy, nandrisika ny tanora hanatevin-daharana ny vondrona mpanafika mahery setra tany Mozambika avaratra ity pejy Facebook ity
Voadika ny 01 Febroary 2019 17:29 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, čeština , 繁體中文, Ελληνικά, Português
Sarin'ireo trano ravan'ny afo nandritra ny fanafihana. Saripikan'i Borges Nhamire, nahazoana alalana.
Nanomboka ny volana Oktobra 2017, nisy vondron'olona mitam-piadiana tsy fantatra nampihorohoro ny avaratr'i Mozambika tamin'ny fanaovana habibiana izay namoizana ain'olona 200 mahery ary nandrava tanànakely maro .
Amin'ny alina sy amin'ny vao maraina mbola maizina matetika no mitranga ny fanafihana any amin'ny faritra saro-dalana any amin'ny faritanin'i Cabo Delgado, akaikin'ny sisintany mifanolotra amin'i Tanzania. Miaraka amin'ny fitaovam-piadiana sy ny sabatra, manafika tananakely ireo vondron'olona ireo, mitifitra sy manapa-doha olona, ​​mandoro trano, mangalatra ireo sakafo, ary mandositra any amin'ny ala manodidina eo.
Raha miezaka mafy ny manampahefana Môzambikana mba hitady ny fiandohana sy ny antony manosika ireo vondron'olona hanao izany dia nanambara ny gazety ao an-toerana Carta de Moçambique (taratasy avy any Mozambika amin'ny teny Portiogey) tamin'ny volana Desambra 2018 fa mety nanampy tamin'ny fisarihana sy ny fananganana ity vondron-jiolahy misitery ity ny kaonty Facebook izay mampiasa anarana foronina iray.
Amin'ny anarana hoe Shakira Júnior Lectícia, navitrika nandritra ny 14 volana ity kaonty ity nanomboka hatramin'ny 25 Oktobra 2017. Nandritra izany fotoana izany dia nandefa hafatra nidera ny fanafihana tany Cabo Delgado izy ary niantso ireo tanora hanatevin-daharana ny vondrona niaraka tamin'ny fampanantenana vola be. Nilaza ilay kaonty fa mponina monina manodidina an'i Expansão, ao an-tanàndehiben'i Pemba, renivohitr'i Cabo Delgado i Shakira Júnior Lectícia.
Nakatona ilay kaonty nony farany ary tsy azo nidirana nanomboka ny 10 Desambra 2018 . Tamin'izany fotoana izany, dia efa nahatratra ny fetran'ny isan'ny namana ho an'ny Facebook izay 5.000 izy ary nahazo mpanjohy an-jatony maro.
Ny sary mombamomba ilay kaonty, niaraka tamin'ny sary maromaro izay navoakany tamin'ny taon-dasa, dia nalaina avy amin'ny olona izay nilaza fa tsy anisan'ireo mpanafika tao Cabo Delgado izy ireo, araka ny fitantaran'ny Carta de Moçambique. Matetika ny sary maneho ireo olona mitazona metikais (vola mozambikana) maromaro eny an-tanana.
Nanara-maso ireo olona miisa efatra izay nanana sary navoaka tao amin'ilay kaonty ireo mpanao gazety ao amin'ny Carta de Moçambique , anisan'izany ny tena tompon'ilay sary ara-dalàna tao amin'ilay kaonty. Nohamafisin'izy rehetra fa azy ireo ny sary kanefa tsy manana fifandraisana amin'ilay kaonty izy ireo. Tsy nisy nahalala ny fomba nahazoan'ireo mpitantana ny kaonty ny sarin'izy ireo.
Sary nalefan'i Shakira tao amin'ny Facebook. Pikantsarin'ny MediaFax.
Manana fifandraisana amin'i Cabo Delgado avokoa ireo olona miisa efatra izay nohadihadiana tamin'ilay famoahana. Ny sasany mipetraka any amin'ny faritany, ary ao anatin'ireo distrika iharan'ny fanafihana. Ny hafa indray monina any ivelan'i Cabo Delgado.
Araka ny filazan'ny Carta de Moçambique, izay nanara-maso ny hetsik'ilay kaonty dia namoaka ny sarin'ny tovolahy iray mitazona vola metikais maromaro i Shakira ny 11 sy 22 Novambra 2018, niaraka tamin'ny filazalazana fa nahazo ny vola izy ho valisoa noho ny fanatevenan-daharana ny fikomiana.
Nahafatesana lehilahy miisa enina ny fanafihana tao amin'ny distrikan'i Pundanhar tamin'ny 11 Novambra 2018. Hita tany anaty ala niaraka tamin'ny mariky ny fanafihana tamin'ny sabatra ny fatin'izy ireo.
Nandefa sary ora vitsy taorian'ny fanafihana i Shakira ary talohan'ny nitateran'ny fampahalalam-baovao Mozambikana momba izany, izay nahatonga ny ahiahy bebe kokoa.
Manadihady ity raharaha ity ny Sampan-draharaham-pirenena misahana ny Fanadihadiana ny Heloka Bevava ao Mozambika .
Niampanga olona miisa 189 nanana fifandraisana tamin'ireo fanafihana ny manampahefana hatramin'ny fotoana nanoratana. Antenaina hampihatra didim-pitsarana amin'ny voalohandohan'ny taona 2019 ny fitsarana izay nanomboka tamin'ny volana Oktobra 2018, araka ny gazety ao an-toerana.
Anisan'ireo voampanga ny olom-pirenena avy ao Mozambika sy Tanzania, Somalia, Burundi ary ny Repoblika Demokratikan'i Congo ihany koa. Vehivavy miisa 42 sy lehilahy miisa 147 izy ireo.
Matetika ny polisy no manao fisafoana ao amin'ilay faritra ary misambotra matetika ireo olona ahiahiana ho manana rohy tamin'ny herisetra. Namerina zatovolahy maro tany amin'ny fianakaviany izy ireo taorian'ny fisamborana azy ireo raha mbola teny am-pandehanana ho any amin'ireo distrika voakasika. Nilaza ny polisy fa mampanantena asa sy vola ireo mpisintona olona.
Mbola misitery ny fototra niavian'ny vondrona
Mbola tsy voavaha ny fomba namatsiana vola ny fanafihana tany Cabo Delgado, ny karazana fampiofanana nampiasaina, ary ny tena nahaliana ireo mpanafika.
Na dia nisy aza ny tena fanahiana tamin'ny fampihorohoroana ara-pinoana dia mbola fanombatombanana ihany izany hatramin'izao. Vao mainka nampiteraka resabe ny lahatsary iray niely tao amin'ny media sosialy, anisan'izany ny tao amin'ny Facebook, tamin'ny volana Janoary 2018.
Raha nalaina tany anaty ala ity lahatsary ity dia mampiseho andian-dehilahy miisa dimy mitafy akanjo sivily sy manao saron-doha, mitana fitaovam-piadiana ary lehilahy iray mitazona sabatra. Miresaka amin'ny teny Portiogey nidera ny fanafihana tany Mocímboa da Praia (toerana nahafatesan'olona marobe tamin'ny faramparan'ny taona 2017) ilay lehilahy ary niantso ny Mozambikana mba hanatevin-daharana ny vondrona.
Kristiana ny ankamaroan'ny mponina ao Mozambika ary misy 18 isanjato milaza azy ho Miozolomana. Monina any amin'ny faritra avaratry ny firenena ny ankamaroan'ny Mozambikana Miozolomana.
Nanolotra soso-kevitra hafa ny fanadihadiana navoakan'ny mpikaroka avy ao amin'ny Ivontoerana momba ny Fikarohana Ara-tsosialy sy Ara-toekarena (IESE) tamin'ny volana May 2018 sy ny Fikambanan'ny Fanohanan'ny Fiarahamonim-pirenena (MASC) .
Taorian'ny antsafa nifanaovana tamin'ireo mpandray anjara maromaro tao amin'ireo distrika voakasik'izany dia fantatra fa resaka ara-bola (ara-toekarena) no tanjon'ity vondrona ity: mikendry ny hanome fahafahana ho an'ireo tanora voahilikilika mba hahazo tombontsoa amin'ny alàlan'ny fanondranana hazo, vangin'elefanta, saribao ary vatosoa mena antsokosoko ao amin'ity faritany be loharanon-karena ity ny vondrona.
Ahitana ny 40 isanjaton'ireo tahirim-batosoa mena malaza manerantany ny ao Cabo Delgado ary manana etona sy solitany ampy tsara hanodinana an'i Mozambika ho mpanondrana etona voajanahary fahatelo lehibe indrindra manerantany aorian'i Qatar sy Aostralia manomboka amin'ny taona 2022.
Na izany aza anefa dia mbola mahantra hatrany ny mponina ao aminy, ary tsy an'asa amin'izao fotoana izao ny 24 isanjaton'ireo mponina eo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 24 taona tsy an'asa, araka ny angon'ny governemanta .